विद्यालयमा बम आतंक फैलाउँने मूख्य योजनाकार पक्राउ - Himalayan Kangaroo
Posted by Himalayan Kangaroo | ५ कार्तिक २०७३, शुक्रबार ०५:५८ |
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विद्यालयमा बम विष्फोट गराउने मुख्य योजनाकारलाई प्रहरीले शुक्रवार सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।
विद्यालयमा बम आतंक फैलाउँने मूख्य योजनाकारसहित दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट केन्द्र नामक पार्टीका महासचिव बताउने केशब दाहाल र आफूलाई सो पार्टीको विद्यार्थी संगठनका संयोजक बताउने मिन देवकोटालाई प्रहरीले गएराति पक्राउ गरेको हो ।
गत असोज ४ गते काठमाडौं र ललितपुरका विद्यालयहरुमा बम विष्फोट गराइएको थियो । घटनास्थलमा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी केन्द्र र योङ कम्युनिष्ट फोर्स नेपाल नामको पर्चा भेटिएको थियो । ति क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट केन्द्र नामक पार्टीका भ्रातृ संगठनहरू हुन् ।बम विष्फोटलगत्तै मिन देवकोटाले घटनाको जिम्मा लिएका थिए ।
घटना भएको एक महिनापछि पक्राउ परेका उनीहरुलाई शुक्रबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरी सार्बजनिक गरिने प्रहरीको तयारी छ ।
अपराध महाशाखा र काठमाडौं प्रहरी परिसरको संयुक्त टोलीले दाहाल र देवकोटालाई काभ्रेस्थित एक घरबाट पक्राउ गरेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
माओवादी कम्युनिष्ट केन्द्र नेपाल अर्धभूमिगत समूह हो । यसको नेतृत्व देवेन्द्र सिंह (डिएस) महतले गरेका छन् । प्रहरीले महतको पनि खोजी भइरहेको जनाएको छ । माओवादी पूर्वलडाकुहरुलाई समेटेर महतले माओवादी केन्द्रसँग मिल्दोजुल्दो समूह बनाएर बम र चन्दा आतंक फैलाउँदै आएका छन् । यहि समूहले गत साउन ६ गते काठमाडौंको डल्लुमा एक विद्यालयको बस पनि जलाएको थियो ।
बम विष्फोट गराएको आरोपमा दाहाल र देवकोटासहित अहिलेसम्म ६ जना पक्राउ परिसकेका छन् । यसअघि शंकर लाखे, चन्द्रबहादुर तामाङ, विष्णु पौडेल र होमबहादुर खत्री पनि पक्राउ परेका थिए । तर, त्यतिबेला उनीहरुलाई प्रहरीले तारेखमा छाडेको थियो ।
Previousएमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको विदेश भ्रमण स्थगित
Nextअष्ट्रेलियाको ४५७ भिसा कुन कुन पेशाले पाउँछन् ? के परिवार ल्याउन पाउँछन् ?
म्यानपावर सञ्चालकको सामू घुँडा नटेक्ने श्रम मन्त्रालयको अडान
९ चैत्र २०७२, मंगलवार १६:३६
दलका घोषणपत्र, फोस्रा नारा !
७ मंसिर २०७४, बिहीबार ०२:०८
एकै दिन गाई, गोरु र गोबद्र्धन पूजा
२६ कार्तिक २०७२, बिहीबार ०२:०६
विवादमा काँग्रेस : आखिर के भयो त्यस्तो ?
१८ कार्तिक २०७२, बुधबार ०२:०९